I-India yenza izivivinyo ze-COVID-19, ibophezela ukuvalela abantu bodwa ngokugunyazwa kuwo wonke amaBrits
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-India yenza izivivinyo ze-COVID-19, ibophezela ukuvalela abantu bodwa ngokugunyazwa kuwo wonke amaBrits
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Le mfuneko entsha kubukeka sengathi yethulwe ngenxa yezinyathelo ezifanayo ezibekwe izakhamizi zaseNdiya yi-United Kingdom.
I-India ibize isinqumo saseBrithani sokungawamukeli umuthi wokugoma wase-AstraZeneca, owaziwa nge-Covishield, "obandlululayo".
Izakhamizi zase-UK ezigonyiwe ezifika eNdiya zizonikezwa izinsuku eziyishumi ezinesibopho sokuhlukaniswa.
Kusukela ngoMsombuluko, bonke abafika e-UK kuzodingeka bethule ukuhlolwa okungalungile kwe-COVID-19 okuthathwe amahora angama-72 ngaphambi kokuhamba.
Ngokusobala okubizwa nge-tit-for-tat, izikhulu zoMnyango Wezangaphandle e-India namuhla zimemezele ukuthi bonke abantu base-UK, kubandakanya nabagonywe ngokuphelele, bazonikezwa igunya lokuhlukaniswa ngezinsuku eziyishumi lapho befika eNdiya.
Isidingo esisha sibonakala sethulwa ngokuphendula okufanayo izinyathelo ezibekwe kubantu baseNdiya yi-UK.
Isimemezelo esisha senqubomgomo siza ngemuva kokuthi uNobhala Wezangaphandle waseNdiya uHarsh Vardhan Shringla ebize isinqumo seBrithani sokungayamukeli inguqulo yaseNdiya I-AstraZeneca umuthi wokugoma, owaziwa nge-Covishield, "obandlululayo".
Ungqongqoshe wayexwayise ngezinyathelo zokuphindisela uma iLondon ihluleka ukucubungula kabusha.
Kusukela ngoMsombuluko, bonke abafika eBrithani - kungakhathalekile ukuthi bagonywe kanjani - kuzofanele bethule isivivinyo esibi se-COVID-19 esithathwe isikhathi esingamahora angama-72 ngaphambi kokuhamba, bayohlolwa okwesibili lapho befika nolwesithathu ngemuva kwezinsuku eziyisishiyagalombili.
Isikhathi sokuphoqeleka sokuhlukaniswa kwezinsuku eziyishumi naso sizophoqelelwa, ngokusho kwesikhulu soMnyango Wezangaphandle.
Uhulumeni waseBrithani umemezele ngenyanga eyedlule ukuthi uzovumela abahambi abagonywe ngokuphelele ukweqa ukuvalelwa bodwa futhi bathathe izivivinyo ezimbalwa, kepha kuphela ukugoma okugunyaziwe ngaphansi kwezinhlelo zaseMelika, zaseBrithani noma zaseYurophu noma lezo ezigunyazwe ngumgwamanda wezempilo ovunyelwe.
Amazwe angaphezu kweshumi nambili e-Asia, eCaribbean naseMiddle East angena ohlwini, kodwa IndiaUhlelo aluzange lufakwe. Futhi, alukho uhlelo lwe-Afrika olwamukelwa.
Iningi lamaNdiya ligonywe okwenziwe ngamaNdiya I-AstraZeneca isibhamu, esenziwe yiSerum Institute of India. Abanye bathole i-COVAXIN, umuthi wokugoma owenziwa yinkampani yaseNdiya engasetshenziswa eBrithani.
Ukwenqaba kweBrithani ukwamukela izitifiketi ezithile zokugoma sekuholele ekukhathazekeni ngokuthi kungakhulisa ukungabaza komuthi.
Amazwe athola amanani angamakhulu ezinkulungwane emithi yokugoma i-AstraZeneca evela kuhulumeni waseBrithani asala ezibuza ukuthi kungani izinhlelo zawo zokugoma zazingalungile ngokwanele kumhlinzeki wawo.